Knowledges Archives - Alinnpya
January 15, 2021 AlinnPya Comments Off on ကလေး မိခင်တွေ လိုအပ်ရင် အလွန်ရှာရခက်လို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ပိုက်ဆံက ရှာသလောက် မလောက် ကုန်နေတဲ့သူများ ဒီနည်းလမ်းကို သုံးကြည့်လိုက်ပါ
January 13, 2021 AlinnPya Comments Off on ပိုက်ဆံက ရှာသလောက် မလောက် ကုန်နေတဲ့သူများ ဒီနည်းလမ်းကို သုံးကြည့်လိုက်ပါ
ပိုက်ဆံက ရှာသလောက် မလောက် ကုန်နေတဲ့သူများ ဒီနည်းလမ်းကို သုံးကြည့်လိုက်ပါ မိမိ ရှာနိုင်သလောက်ငွေကို မကုန်အောင်သုံးတဲ့ နည်းလမ်း ( ၇ ) ခု…။ တန်ဖိုး ရှိလိုက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေပါ။ရှာနိုင်တာထက် လျှော့သုံးနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း(၇)ခု၊ရှာနိုင်တာထက် လျှော့သုံးနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း(၇)ခုစီးပွားရေး, အောင်မြင်ရေး ငွေကြေးဆိုင်ရာပညာရှင်တွေအားလုံးက သင်ရှာနိုင်တာထက် လျှော့ပြီးသုံးဖို့ ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ အသုံးစရိတ်က ဝင်ငွေထက် နည်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကြားဖူးနေတာ မှန်ပေမယ့်သေချာနားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဝင်ငွေထက် နည်းတဲ့ […]
January 13, 2021 AlinnPya Comments Off on မြန်မာစုံတွဲ ကိုယ်တိုင်ရိုက်တွေ တစ်နေ့ကို ဆယ်ကားလောက် မြင်တွေ့နေရတယ်
မြန်မာစုံတွဲ ကိုယ်တိုင်ရိုက်တွေ တစ်နေ့ကို ဆယ်ကားလောက် မြင်တွေ့နေရတယ် အွန်လိုင်းပေါ်မှာမြန်မာစုံတွဲ ကိုယ်တိုင်ရိုက်တွေ တစ် နေ့ကို 10 ကားလောက် နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတယ် ခုနောက်ပိုင်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာမြန်မာစုံတွဲ ကိုယ်တိုင်ရိုက်တွေ တစ်နေ့ကို 10 ကားလောက် နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတယ်/.. အွန်လိုင်းပေါ်မှာမြန်မာစုံတွဲ ကိုယ်တိုင်ရိုက်တွေ တစ် နေ့ကို 10 ကားလောက် နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ…မြန်မာစုံတွဲ…ချောင်းရိုက်တွေ…ကိုယ်တိုင်ရိုက်တွေ တနေ့ကို…၁ဝကားလောက်.. နေ့စဉ် မြင်တွေ့နေရတယ်၊အဲဒီကာယကံရှင် တွေရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်..အဲဒီကားတွေ မြင်တွေ့နေကြရမှာပါ။ တချိန်မှာ…ငါ့အဖေတွေ…ငါ့အမေတွေဆိုပြီး…သူတို့သားသမီးတွေလည်းမြင်နေကြ ရမှာဆိုတော့တွေးကြည့်ရင်….ပြသာနာအကြီးကြီးတွေပါ။ မသိနားမလည်တဲ့ […]
December 16, 2020 AlinnPya Comments Off on မသုံးတတ္ရင္ မေကာင္းဆိုးဝါးပင္ဟုပင္ ေခၚဆိုေလာက္တဲ့ ပဒိုင္းပင္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား ႏွင့္ အသုံးဝင္ပုံ
ျမန္မာ အမည္ – ပဒိုင္း၊ အျခားအမည္ – ေဆးမင္းရာဇာ လို႔လဲေခၚပါသည္၊၊ ထိုင္းမွိုင္းမူးေဝၿပီး စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ သတၱိ ရွိ၍ ပန္းထိုင္း၊ ပတိုင္း၊ ပဒိုင္းဟု အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲ ေခၚေဝၚၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပါဠိ အမည္မွာ ဥမတၱက ၊ မာတုလ လို႔ေတြ႕ရပါသည္၊၊ ပဒိုင္း၏ အမည္မွာ Datura ျဖစ္သည္။ Solanaceae မိသားစုဝင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚရွိ သမပိုင္းေဒသမ်ားႏွင့္ အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ […]
October 2, 2020 AlinnPya Comments Off on ကိုဗစ်ကာလမှာ ကံကောင်းစေမယ့် နိမိတ်ကောင်း ဘုရားလာဖူးတဲ့ မြွေကြီးပါ
ကိုဗစ်ကာလမှာ ကံကောင်းစေမယ့် နိမိတ်ကောင်း . ဘုရားလာဖူးတဲ့မြွေကြီးပါ အကယ်၍ သင်သည် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ကုန်စုံဆိုင် …စသည်ဖြင့် ဈေးရောင်းချခြင်းဖြင့် စီးပွားရှာသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်ဆိုပါစို့ …။နံနက်စောစောဆိုင်ဖွင့်ချိန်တိုင်းတွင် အောက်ပါနည်းကလေးကို ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင်၏ဆိုင်တွင် ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းပွင့်လန်းကာ လာဘ်ရွှင် ဝင်ငွေတိုးစေပါလိမ့်မည်။ ငွေစက္ကူတစ်ထောင်တန်တစ်ရွက်ကို တစ်လက္ခမခန့် လေးထောင့်ပုံလေးဖြစ်အောင် ခေါက်ပါ။ ပိုက်ဆံကြဲသောအခါများတွင် ခေါက်လေ့ရှိကြသကဲ့သို့ ခေါက်ပါ။ ထိုအတိုင်း နှစ်ခု ပြုလုပ်ပါ။ထိုတစ်ထောင်တန်ငွေစက္ကူအခေါက်ကလေး နှစ်ခုကို သင်၏ လက်ဝဲဘက်လက်တွင် ဆုပ်ထားပါ။ […]
စတုတ္ထမြောက် မဟလ္လတာတန်ဆာ ဝတ်ဆင်သူပေါ်လာပြီ
August 28, 2020 AlinnPya Comments Off on စတုတ္ထမြောက် မဟလ္လတာတန်ဆာ ဝတ်ဆင်သူပေါ်လာပြီ
စတုတ္ထမြောက် မဟလ္လတာတန်ဆာ ဝတ်ဆင်သူပေါ်လာပြီ ဗဟုသုတရေစရန် ကူးယူဖော်ျပသည် ဘုရားရှင်သက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်အခါကမဟလ္လတာ တန္ဆာကိုဆင်မြန်းရသူများမှာ ( 1 ) ပုဗ္ဗာရုံကျောင်း အမကြီး ဝိသာခါ (2) ဗန္ဓုလစစ်သူကြီး၏ မိဖုရားမလ္လိကာအမျိုးသမီး (3) ဗာရာဏသီ သူဋ္ဌေးကြီးရဲ့သမီးသုမနာ ဆိုပြီး စာပေမှာတွေ့ရတယ် 12 . 8 . 2020 .နေ့က သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံမှာ စတုတ္ထမြောက် […]
July 21, 2020 AlinnPya Comments Off on လက်တွေ့အသုံးချလို့ရတဲ့ ဆေးနည်းတိုလေးတွေ
၁။ သွေးတိုးလို့သွေးကျလိုလျှင် သံပုရာသီးတစ်လုံးကို ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ရေစိမ်ပြီး အရည်ညှစ်၍ ကြက်ဥတစ်လုံး ဖောက်ထည့်ကာ ရောမွှေ သောက်လိုက်ပါ။ သွေးကျဆေး အထူးသောက်စရာ မလိုဘဲ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ၂။ အပူကျိတ်ဖြစ်ရင် ပါးချိတ်အောက်နှင့် ပေါင်ကြားတို့တွင် ပေါက်တက်သော အပူကျိတ်များကိုပျောက်လိုလျှင် နနွင်းခါးဥကို သွေးလိမ်းပါ။သုံးကြိမ်မျှ လူးရုံ လိမ်းရုံနှင့် ပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ၃။ အိပ်မပျော်ခြင်းဖြစ်လျှင် ဒန့်ကျွဲမြစ်ကိုပြုတ်၍သကြားအနည်းငယ် ထည့်ပြီးသောက်ပါ။တစ်ခါသောက်လျှင် အကြမ်းပန်းကန်နှင့်တစ်လုံးသောက် ည ၊ နံနက် သောက်ပါ။အိပ်မပျော်ခြင်းဝေဒနာ သက်သာပျောက်ကင်းစေမည်။ […]